MM-NEWS Archives - ApannPyay Media
အကြောအားဆေး သွင်းသကဲ့သို့ အားအမြန် ပြည့်စေပြီး အာရုံ ကြောအား အကြောအား ကောင်းမွန်စေသည့် ဆေးနည်း
March 9, 2022 by ApannPyay Media
အကြောအားဆေး သွင်းသကဲ့သို့ အားအမြန် ပြည့်စေပြီး အာရုံ ကြောအား အကြောအား ကောင်းမွန်စေသည့် ဆေးနည်း အာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လွယ်ခြင်း၊ ခြေလက်လေးလံခြင်းနှင့် ညအိပ်မပျော်ခြင်း ညအိပ်မပျော်တာ ကြာရှည်လာခဲ့လျင် အစားအသောက် စားရာတွင်လည်း ခံတွင်းမလိုက်တော့ပါဘူး။ အိပ်မပျော် စားမဝင်တော့ဘူးဆိုလျင် အာရုံကြော အားနည်းလာတ တ်ပါတယ်။ နှ လုံးအားပါ နည်းလာတတ်ပါတယ်။ သွေး ပေါင်ချိန်လည်း မမှန်တတ်ပါဘူး။ ဦးခေါင်းပိုင်း ချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ ခြေဖျားလက်ဖျားအေးခြင်း၊ မျက်စိဝေခြင်း၊ နားလေထွက်ခြင်းစတာတွေနဲ့ အ ဆုတ်၊ ကျော က်ကပ် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းပြီး အစာမကြေခြင်း၊ ဝမ်းချုပ် စမြင်းခံခြင်း စတာတွေနဲ့ ပါတ်လည်ရိုက်နေတတ်ပါတယ်။ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အနည်းငယ် လုပ်ရုံမျှနဲ့ မောပန်းလွယ်ခြင်း၊ စိတ်မရှည်ခြင်း စတာတွေဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။အထက်ပါ အာရုံကြော ရောဂါအတွက် ရိုးရှင်း လွယ်ကူတဲ့ ဆေ … Read more
Categories HEALTH, MM-NEWS
ကျောင်းဒကာမ အလှူ့ဒကာမကြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆင်မကြီး မငွေစိန် အကြောင်း အလှူ့အမ ကျောင်းအမကြီးမငွေစိန် (သို့မဟုတ်) ဆင်မကြီး မငွေစိန် တစ်ကယ်တော့ မငွေစိန်ဆိုတာ တစ်ခေတ်တစ်ချိန်က နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ဆင်မကြီး ရဲ့ နာမည်ပါ။ မငွေစိန်ရဲ့ ဇာတ်လမ်း က ဒီလိုပါ။ ဟိုရှေး က မုံရွာမြို့ မြောက်ဘက်၂၉-မိုင်ခန့် အကွာ ရှေး အခေါ် အလုံမြို့နယ် ထဲက (ဝက်ရဲရွာ) ရှိလယ်ယာ လုပ်ခင်းတွေ ကို တောဆင်ရိုင်းတို့ မကြာခဏ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတတ်ပါတယ်။ ရွာသားတို့ကလည်း မကြာခဏပင် နည်းမျိုးစုံသုံး ကာ မောင်းထုတ် ကြရပါတယ်။ တစ်ခါမှာတော့ မပြေးနိုင်တော့တဲ့ ဆင်မငယ်လေး တစ်ကောင် ဖမ်းဆီးရရှိရာ ရွာဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ ပို့လှူ ကြပါတယ်။ ၁၂၄၈-ခုနှစ်လောက် ကပါ။ … Read more
မီတာခတွေ ဈေးတက်နေလို့ စိတ်ညစ်နေသလား၊ ဒီအချက်တွေ လိုက်နာကြည့်ပါ
March 4, 2022 by ApannPyay Media
မလိုအပ်ပဲ ပိုသုံးထားခြင်း စသည့်အချက်များက သင့်အိမ်ရဲ့ မီတာခကို ပုံမှန်ထက် ပိုမို ကျသင့်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မီတာခ ချွေတာနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ (၁) တစ်အိမ်လုံးတွင် မည်သူမျှ မရှိနေချိန်၌ မလိုအပ်သော လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှု အားလုံးကို ပိတ်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ကို ချွေတာသုံးစွဲပါ။ (၂) မီးပူတိုက်နေစဉ်၊ တစ်ခုခုလုပ်ရန် ခေတ္တ ထသွားပါက၊ မီးပူခလုပ်ကို ပိတ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်အသုံးကို ချွေတာပါ။ (၃) အမှန်တကယ် ကြည့်မည့်အချိန်၌သာ တီဗွီကိုဖွင့်ပါ။ ကြည့်သူမရှိဘဲ အချိန်ပြည့် ဖွင့်ထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ (၄) မျက်နှာသစ်စဉ်၊ သွားတိုက်နေစဉ် ရေပိုက်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါက၊ ရေဆုံးရှုံးရပြီး၊ ရေပြန်တင်ရန် လျှပ်စစ်သုံးဖို့ လိုအပ်လာပါမည်။ ထို့ကြောင့် သွားတိုက်နေစဉ် ရေပိုက်ခေါင်းကို ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် … Read more
တောင်သူတွေအတွက် လွယ်ကူသည့် ကောက်ရိုးမြေဆွေး ပြုလုပ် သုံးစွဲခြင်း
ယခုပို့စ်သည် ကောက်ရိုးများပေါများသည့် ဒေသရှိ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကောက်ရိုးရရှိရန် အဆင်မပြေပါက ဗေဒါရွက်၊ ငှက်ပျောရွက် စသည်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကောက်ရိုးမြေဆွေး ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်.. မြေဆွေးပုံ အရွယ်အစားအနေဖြင့် အလျား ၆ ပေ၊ အနံ ၄ ပေ ၊ အမြင့် ၃ ပေ ရှိရပါမည်။ ကောက်ရိုးမြေဆွေး ပြုလုပ်မည့်နေရာအတွက် ရေမဝပ်နိုင်သည့်နေရာကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ ပထမဆုံးကောက်ရိုးအလွှာအဖြစ် ၆ လက်မအမြင့်ရသည်အထိ ကောက်ရိုးကို ညီညီညာညာ ဖြန့်ကျက်လိုက်ရပါမည်။ ကောက်ရိုးများ ခြောက်သွေ့လွန်းနေပါက ရေဖျန်းပေးပြီး ခပ်သိပ်သိပ်ဖြစ်စေရန် ဖိသိပ်ပေးရပါမည်။ ထိုကောက်ရိုးပေါ်သို့ အီးအမ်ဖျော်ရည် အနည်းငယ်ပက်ဖျန်းပေးရပါမည်။ (အီးအမ်ဖျော်ရည်လုပ်နည်းကို အောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်) ထိုသို့ပုံစံအတိုင်း ၆ လွှာ အမြင့်အားဖြင့် ၃ … Read more
နေ့အပူချိန်တွေ တိုးပြီး မီးသတိပြုရမယ့် ဒေသတွေကို ပြောလိုက်တဲ့ စုစုစံ
တို့တောင်ပေါ်နွေ ဟိုအရင်အဟောင်းအနွမ်းများဇာတ်မြုပ်လို့ထားပြီ ပြန်လည်ကာမစဉ်းစားပဲ မေ့ချင်သူအတွက် ဒီကနေဘဝအသစ်တခု အစပြုမယ်လို့ ရည်ရွယ်ကာထားတဲ့…. တို့…တောင်ပေါ်နွေ.. တို့တောင်ပေါ်နွေတိုးပူလာတယ်။ ညောင်ရွှေ ရွှေညောင် အင်းလေး တောင်ကြီး ရပ်စောက် ဗထူး ပူမယ်နော် မီတာခကုန်ပေါက်ပဲ။ (ခန့်မှန်းချိန် ၁-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီ ၂၅ မိနစ်) လေစိမ်းတွေ တိုက်နေတယ် လေစိမ်းတွေတိုက်နေတယ် အရင်လိုမင်းစကားတွေ မချိုတော့ဘူးကွယ်။ ၁-၃-၂၀၂၂ မနက် ၇ နာရီအချိန်မှ ၂၄ နာရီအတွင်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း ပြည်ခရိုင် မင်းဘူးခရိုင် ညောင်ဦးခရိုင် ပခုက္ကူခရိုင် မြင်းခြံခရိုင် ကျောက်ဆည်ခရိုင် မန္တလေးခရိုင် စစ်ကိုင်းခရိုင် ရွှေဘိုခရိုင် မုံရွာခရိုင်တွေမှာ လေရူးပွေကာ နေ့အပူချိန်များတိုးလာနိုင်ပါတယ်။ မီးသတိပြု။ (ခန့်မှန်းချိန် ၁-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ မနက် ၇ … Read more
March 3, 2022 by ApannPyay Media
KBZ ဘဏ် အကောင့်ထဲ မှားဝင်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၁၃၆ သိန်း ကို ပြန်ထုတ်ပြီး ပိုင်ရှင်ထံကိုပေးအပ်ခဲ့သူ KBZ ဘဏ်အကောင့်ထဲမှားဝင်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၁၃၆ သိန်း ၃ သောင်းကို ပြန်ထုတ်ပြီး ပိုင်ရှင်ထံပေးအပ်ခဲ့သူ ရွှေ ငွေနဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်တို့ မရှိလည်း နေနိုင်ပါတယ် တစ်သက်လုံး အလိုအပ်ဆုံးက ဘဝမှာ အရိုးသားဆုံးနေဖို့ ကျနော့် KBZ Bank Accountထဲမှားဝင်တဲ့ပိုက်ဆံ ၁၃၆ သိန်း ၃သောင်း ကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဟုမ္မလင်းက အမကြီးကို ပြန်လည်ထုတ်ယူပြီး ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် တော်သေးတယ်ရှင့် မောင်လေးလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့လို့ ပြန်ရတာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘယ်လိုမှ မအောင်းမေ့ပါနဲ့ ဆိုပြီးပိုက်ဆံ ၁ဝသိန်း ထုတ်ပေးပေမယ့် တစ်ပြားမှ မယူပါရစေနဲ့ရိုးသားတဲ့ဂုဏ် တစ်သက်စား မကုန်ပါဘူး အစ်မရယ် ဆိုတော့ အားနာပါတယ် … Read more
အိမ်မှာသားလေးကို ထားခဲ့ဖို့စိတ်မချ၍ စက်ဘီးရှေ့ခြင်းလေးတွင်ထည့်ကာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သော ဖခင်တစ်ဦး
အိမ်မှာသားလေးကို ထားခဲ့ဖို့စိတ်မချ၍ စက်ဘီးရှေ့ခြင်းလေးတွင်ထည့်ကာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သော ဖခင်တစ်ဦး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အသက်၂ဝကျော်အရွယ် ကောင်လေးသည် အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်လည်းမရှိသေးတာကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ ဦးလေးအိမ်မှာ ကပ်နေခဲ့ရသည်။ ဦးလေးအိမ်မှာ နေရသည့်အတွက် သူတို့ဇနီးမောင်နှံသည် လစဉ်အသုံးစရိတ်ကို ပေးအပ်ရကာ ကလေးတစ်ယောက်ပါပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက် တစ်ယောက်တည်းလုပ်စာနဲ့ မလုံလောက်ပဲဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် အပြင်အလုပ်ထွက်လုပ်ကာ သားလေးကိုအိမ်မှာ ထားခဲ့ဖို့ရာလည်း ကြည့်ပေးမည့်လူမရှိ၍ အစားအစာလိုက်ပို့ရင်း အလုပ်ထဲသို့ ခေါ်သွားခဲ့ရသည်။ သားလေးသည် စက်ဘီးရှေ့ခြင်းတွင် ငြိမ်သက်စွာ လိုက်ပါလာကာ ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် အမောပြေလေးဖြစ်နေခဲ့သော်လည်း မြင်တွေ့သူများမှ ညမိုးချုပ်သည်ထိ အစားအစာလိုက်ပို့နေရသေး၍ ကလေးမှာငယ်သေးသည့်အတွက် အန္တရာယ်များလှကြောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ Credit-Hlaing (crd) အိမ္မွာသားေလးကို ထားခဲ့ဖို႔စိတ္မခ်၍ စက္ဘီးေရွ႕ျခင္းေလးတြင္ထည့္ကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ ဖခင္တစ္ဦး ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ အသက္၂ဝေက်ာ္အရြယ္ ေကာင္ေလးသည္ အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္လည္းမရွိေသးတာေၾကာင့္ … Read more
”သားသမီး (၆) ယောက်ကို (၁၁) နှစ် တိုင်တိုင်” စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ် ပြင်ရင်း ရှာကျွေးနေတဲ့ ”အာဂ အမေ”……. အမျိုးသား ဆုံးပါသွား သော်လည်း ၁၁ နှစ် တိုင်တိုင် သားသမီး ၆ ယောက် နဲ့ ဆိုင်ကယ် စက်ဘီး ပြင်ရင်း ကြိုးစား ခဲ့တယ် ’’ လို့ ဆိုလာသူ ဒေါ်စန်းကြည် စာဖတ်ပရိသတ်များ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ … ယခု တခါ တင်ဆက် ပေးမှာ ကတော့ ဖခင် မရှိတော့တဲ့ သားသမီး ၆ ယောက် အတွက် ၁၁ နှစ် တိုင်အောင် စက်ဘီး ဆိုင်ကယ် ပြင်ပြီး ရှာကျွေး ခဲ့သူ မိခင် … Read more
တစ်မိသားစုလုံး ထမင်းငတ်တော့မယ်…ကူညီပါဆိုလို့ အိမ်ကိုသွားစစ်ကြည့်တော့
တစ်မိသားစုလုံး ထမင်းငတ်တော့မယ်…ကူညီပါဆိုလို့ အိမ်ကိုသွားစစ်ကြည့်တော့….စိစစ်ရေးမှူးပါ ငိုပြီးပြန်လာရတဲ့အဖြစ် မနက်က မင်းရသ လူမှုကူညီရေး ပရဟိတအဖွဲ့ ကို ဖုန်း ဝင်လာတယ်။ တောင်ဒဂုံမှာ တစ်အိမ်လုံးကို ရှာကျွေးနေတဲ့ ကောင်မလေးက ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ အလုပ် ခြောက်လ နားရမှာမို့မိသားစု ထမင်းငတ် ရတော့မယ် ကူညီပါတဲ့ ……… အဖွဲ့က ဒေါက်တာ တစ်ယောက် နဲ့ အတူ စိစစ်ရေးမှူး ကိုဝေကြီးက သွားစစ်တော့ သူပါ ငိုပြီး ပြန်လာရတယ်။ အကြောင်းစုံကတော့အတူပါသွားတဲ့ စိစစ်ရေးမှူး ကိုဝေကြီးရဲ့အမျိုးသမီး မဒါ က ဟိုရောက်တော့ ရေးကြီးသုတ်ပြာ ဖုန်းဆက်တယ်။ ကိုမင်းရေ ကောင်မလေးက အစ်မ အဖွားဖြစ်သလိုဖြစ်နေတာ သွေးစောင့်တက်လိုက်တာနဲ့ ပွဲချင်းပြီးပဲ ဒါပေမဲ့ သူရောဂါ ဒီ‌ လောက်ဆိုးမှန်း သူမသိရှာဘူး။ အခုလိုင်းဖွင့် … Read more
လမ်းမကြီးပေါ်မှာပျော်ရွှင်စွာ ကစားနေတဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမေနှင့်သားရဲ့ ဓါတ်ပုံဟာ လူအများရဲ့နှလုံးသားကိုထိမိစေခဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ပကာသနမပါဘဲ ပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ကစားနေတဲ့ဓာတ်ပုံကြောင့် လူအများရဲ့နှလုံးသားကို ထိမိသွားစေခဲ့တဲ့ အိမ်ရာမဲ့သားအမိနှစ်ဦး Manila , Parañaque မြို့ NAIA အမြန်လမ်းမကြီးအောက်ရှိလေယာဉ်လမ်းပေါ်မှာ Ameniel Del Mundo အမည်ရှိ Facebook အသုံးပြုသူရဲ့ကားဟာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မိနေချိန် Ameniel ဟာ မိမိရဲ့အခြေအနေနှင့် အလုပ်ကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဖိစီးနေချိန် လမ်းဘေးမှာအိပ်ပြီးပျော်ရွှင်စွာ ကစားနေတဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမျိုးသမီးနှင့်သူမရဲ့ကလေးကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုမြင်ကွင်းက Ameniel ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ Ameniel ဟာ ထိုအရာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့ပြီး သူ့ Facebook page မှာ “ ပျော်ရွှင်မှု က ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြပေးပါ” ဟူသော ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုဓာတ်ပုံဟာ လူသိများသွားခဲ့ပြီးနောက် အင်တာနက်အသုံးပြုသူများစွာဟာ … Read more